အသားရောနှောကြိတ်စက် ဆိုတာဘာလဲ။ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ချိသူနှင့်စက်ရုံမှအကောင်းဆုံး အသားရောနှောကြိတ်စက် မှအကောင်းဆုံးကိုရှာဖွေရန်
ကျွန်တော်တို့ဟာမြင့်မားတဲ့အရည်အသွေးကိုအပြည့်အဝ-line တွေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာ့ကျယ်ပြန့်ဖောက်သည်တွေ, ကုန်ထုတ်လုပ်မှုထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်တင်ပို့ခဲ့သည် အသားရောနှောကြိတ်စက်ကျမတို့ကနိုင်ငံတကာဖောက်သည်များအတွက်အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရန်သူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးချပြီးကျွမ်းကျင်လုပ်သားအပ်နှံထားသောထံ၌အလုပ်လုပ်သော၏ကစားသမားအရည်အချင်းပြည့်မီခဲ့ပြီ။ ငါတို့သည်ငါတို့၏ဖောက်သည် '' လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်တစ်ခုကျယ်ပြန့်ဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးအနှံ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးပြည့်ထုတ်ကုန်တွေထောက်ပံ့ဖို့ခက်ကြိုးစားကြတယ်။ အဆင့်မြင့်သောပစ္စည်းကိရိယာနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နည်းပညာ၏အခြေခံပေါ်မှာကျနော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုများအတွင်းတင်းကြပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု, သိပ္ပံနည်းကျစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ multi-လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပေါ်အားကိုးထုတ်ကုန်များကျယ်ပြန့်ရာပူဇော်သက္ကာကိုကြသည်။ ကျနော်တို့အနာဂတ်စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုများအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်အသစ်အဟောင်းဖောက်သည်ကြိုဆိုပါတယ်။
ပုံစံ - HTG-114M / 130M
ကြိတ်ခြင်းနှင့်ရောစပ်ခြင်း၏နှစ်ဆ function ကို.
လှော်ရောစပ်2အမျိုးအစား(အခြားရွေးချယ်စရာ),လက်ယာရစ်နာရီသို့မဟုတ်လက်ယာရစ်နာရီအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်.
အော်ပရေတာကိုကာကွယ်ရန်လုံခြုံရေးခလုတ်ဖြင့်စက်၏ ဦး ထုပ်ကိုတီထွင်ခဲ့သည်.
နှစ်ခုဓါးသွားနှင့်သုံးပိုက်ကွန်(စနစ် HTG Unger-114M-ကုလသမဂ္ဂနှင့် HTG-130M-ကုလသမဂ္ဂ)အကောင်းဆုံးရလဒ်ထွက်လာရန်တစ်ချိန်တည်းတွင်နေရာချနိုင်သည်,timesaving နှင့်စွမ်းအင်ချွေတာ
HTG-114M-ကုလသမဂ္ဂ HTG-130M-ကုလသမဂ္ဂ HTG-130M-EN
မော်တော်ကြိတ်ခွဲ 7.5HP အဆင့် 10HP3အဆင့် 10HP3အဆင့်
မော်တော်ရောစပ်ခြင်း ၂ နာရီ ၂ နာရီ ၂ နာရီ
စွမ်းရည် 800kgs/နာရီ 1000kgs/နာရီ 800kgs/နာရီ
Plate Dia. ၁၁၄ မီလီမီတာ
စနစ် Unger 130mm
စက်အရွယ်အစား(WxDxH) 900x1210x1320mm 900x1230x1320mm 900x1160x1320mm
စက်အလေးချိန် 460 ကီလိုဂရမ် ၄၈၅ ကီလိုဂရမ် 480 ကီလိုဂရမ်
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.meat-grinder-manufacturer.com/my/meat-mixer-grinder.html
အကောင်းဆုံး အသားရောနှောကြိတ်စက် ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက် အသားရောနှောကြိတ်စက် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ဖြူးသူ၊ Taiwan